कस्तो पुरुषसंग सम्बन्ध बनाउन चाहान्छन युवतीहरु? यस्तो भन्छ अध्ययन – Ramailo Sandesh
कस्तो पुरुषसंग सम्बन्ध बनाउन चाहान्छन युवतीहरु? यस्तो भन्छ अध्ययन
काठमाडौ। एक अध्ययनले सुन्दरता भन्दा पनि सुगन्धले मानिसको शारी*रिक जीवनमा प्रभाव पार्ने तथ्य फेला पारेको छ। कसैलाई शारी*रिक सम्प*र्कका लागि आकर्षित गर्न पैसा, सुन्दरता तथा फिगर लगायत कुरा तपाईको सुगन्धको अगाडि सब बेकार हुन सक्छन्।
एक्स्ट्रा मेरिटल डेटिङ साइट भिक्टोरिया मिलनले १२ देशका ती मानिसमाथि अनुसन्धान गरेको थियो, जो आफ्नो पार्टनरसँग चीट गरिरहेका थिए। उनीहरुको उक्त धोकेबाजीको कारण बारे सोध्दा हैरान गर्ने कारण सामुन्ने आयो। उनीहरुले भनेका कुराहरुबाट थाहा हुन्छ कि तपाईको शरीरको सुगन्धको कति ठूलो भूमिका हुन्छ।
अध्ययनमा सामेल ७८ प्रतिशत महिलाले शरीरबाट नराम्रो गन्ध आउने पुरुषसँग रात बिताउनु भन्दा उनीहरु एक्लै घर जान मन पराउने बताए। तर पुरुषहरुको प्राथमिकता भने अगल छ। अध्ययनमा सामिल १० मध्ये ५ जना पुरुषले भनेका छन् कि कुनै महिलासँग बेडरुममा गएपछि कुनै पनि प्रकारको गन्धले उनीहरुलाई फरक पार्दैन्।
यद्यपी अध्ययनमा सामेल भएका ५३ प्रतिशत महिलाहरुले आफूहरुलाई प्राकृतिक गन्ध आउने पुरुष मन पर्ने बताए । ६३ प्रतिशत पुरुषहरुले पनि महिलाका बारेमा यस्तै प्रकारको राय व्यक्त गरे। अध्ययनमा सामेल ५० प्रतिशत महिलाले यो पनि भने कि, कुनै जोडीको सम्बन्ध टुट्नुमा पार्टनरको नराम्रो गन्धको पनि भूमिका हुन्छ। खराब स्मेलका कारण उनीहरु मनोरञ्जन गर्न सक्दैनन्।
तपाइलाई हर्ट अट्याकको जोखिम छ कि छैन ? अब यसरी थाहा पाउन सकिन्छ